रेफ्री सुदेश पाण्डेलाई दर्शकको १० मुक्का - Enepalese.com
रेफ्री सुदेश पाण्डेलाई दर्शकको १० मुक्का
इनेप्लिज २०७२ असोज ८ गते ०:३५ मा प्रकाशित
रेड बुल राष्ट्रिय लिगको होम एण्ड अवे अन्तरगत मोरङको लक्ष्मीमार्ग स्थित लक्ष्मी खेल मैदानमा सोमबार भएको खेलमा रुसलान थ्रिस्टार फुटबल क्लवले मोरङ फुटबल क्लवलाई १ बिरुद ४ गोलले पराजित गरेको छ ।
खेलमा मोरङका टेक बा. लिम्बुले २८ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरें । ४७ मिनेटमा थ्रि स्टारका एफीज ओलेलेले मोरङ विरुद्ध १ गोल फर्काएर खेललाई १–१ को बराबरीमा पु¥याए । खेल सुरु भए देखि नै घरेलु टोली मोरङले दवावमा राखेको थ्रि स्टारले पुर्वाद्र्धमा कुनै चमत्कारिक प्रदर्शन गर्न सकेन । मोरङले निक्कै राम्रा अवशर निकाले पनि मोरङले दोस्रो हाफ लगातार दवाव खेप्नु प¥यो । रक्षात्मक देखिएको मोरङको विरुद्ध थ्रि स्टारका सन्तोष साउखडाले ७७, ९० र ९४ ओै मिनेटमा गोल गदै हेटिक गरे । रेफ्री सुदेश पाण्डेले एकपछिय खेल खेलाएको भन्दै रेफ्री बिरुद नाराबाजी गरे । खेलमा सन्तोष साउखडा, सुदिप राई, जगजित श्रेष्ठ र डोडोज हावी भए । ९ गते मोरङले ससस्त्रको सामना गर्ने छ । आजको खेलमा मोरङका टेक बा. लिम्बु म्यान अफ द म्याच घोषित भए । खेल सकिने बितीकै आक्रोसित दर्शकले रेफ्री पाण्डे माथी आक्रमण गरेका थिए । ३ वटा अनावश्यक फल दिएर २ गोल लागेको भनि दर्शकले रेफ्रीलाई लछार पछार पारी हातपात गरेका थिए । दर्शकले रेफ्र पाण्डेमाथि १० मुक्का समेत प्रहार गरे । ससस्त्र प्रहरीले मैदानमा रेफ्रीलाई सुरक्षा दिई दर्शकलाई तितर बितर पारे । आधा घण्टा पछी पनि रेफ्रीलाई मैदान बाहीर निकाल्न ससस्त्र प्रहरीको सहयोग लिनुपर्यो ।